‘Mihoatra noho ny firaisankina tsotra’: Fanomezana avy ao Portiogaly ho an’ny Syriana mpialokaloka ao Hongria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2015 18:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Português, Svenska, 繁體中文, 简体中文, English
Pikantsary avy amin'ny Facebook
Taorian'ny fahitana mampalahelo an'i Alan Kurdî, ankizilahy mpitsoa-ponenana hita faty teny amoron-dranomasina, nikarakara fanentanana fanangonana entana hoan'ireo mpitsoa-ponenana an'arivony voatazona ao Hongria amin'izao fotoana ny olona ao Lisbonina. Ao amin'ny pejy Facebookn'ny hetsika no ahitan'ny mpitsidika ity teny fampidirana momba ny tetikasa ity :
Nampifoha izao tontolo izao eo anatrehan'ny krizy maha-olona ny sarin'i Alan Kurdî.
Mitondra ny anaran'ilay ankizilahy ny tetikasa ary manana adidy ho azy ny aingam-panahy.
Ny valalamanjohin'ny fiara maromaro dia fisantarana andraikitry ny fiarahamonim-pirenena maniry haka sakafo, fitafiana, kilalao, sy zavatra ilain'ireo mpitsoa-ponenana voatazona ao Hongria ankehitriny. Fanehoan'ny vahoaka Portiogey ny firaisankinany izany.
Niely haingana tao Portiogaly ny lazan'ny fanentanana, ary nahasarika ireo haino aman-jery mahazatra ao amin'ny firenena. Haino aman-jery nampivelatra ny fahitana ny tetikasa ary nanampy tamin'ny fitondrana fanomezana betsaka kokoa
Fandrindrana ny fanentanana ao amin'ny fampitam-baovao. Saripika: Facebook (nahazoana alalana).
Kibo saoky ny nahiny ny nanombohan'ny fanomezana, hoy ny mpikarakara. Niorina nanerana ny lalana ny fitehirizana sy ny fanaterana fanomezana ary maro isan-karazany ireo seha-mpandraharahana nanaiky hiantoka amin'ny ampahany ny fandaniana. “Nanomboka tamin'ny fiarabe dimy izy ity ary mahatratra 15 amin'izao fotoana izao,” hoy ny mpikarakara tamin'ny fampitam-baovao portiogey, milaza fa eo am-piezahana hahazoana kamiao lavabe ho entina manamory mankany Hongria ihany koa ry zareo. Kasaina hiainga alohan'ny 18 septambra ny valalamanjohy ary ho tonga any Hongria alohan'ny 20 Septambra.
Amin'izao fotoana izao ny mpikarakara dia mifantoka amin'ny fampitaovana fandrindrana ireo toerana fanangonam-panomezana halefa any amin'ny valalamanjohy, an-dalana ho any amin'ny mpialokaloka. Hanavatsava tanàna maro tahaka an'i Porto, any avaratry ny firenena, Leiria ao afovoany, ary Lisbonina misy ny fitehirizan'entana ireo kamiao. Ireo entana voaangona dia akanjjo, kilalao, sakafo ary fitaovam-pitsaboana vonjimaika.
Mitady mpirotsaka an-tsitrapo hanampy amin'ny fampitaovana sy hanolo-tena ho mpanamory fiara ihany koa ny mpikarakara. Mandray fanampiana avy amin'ny orinasa tsy miankina manolotra fanohanana ara-pitaovana ihany koa ry zareo,:
Toe-draharaha: Tazony any an-trano na any am-piasana ny ho atao fanomezana.
Maro ihany koa ny orinasa sy sampan-draharaha manangona ny fanomezana.
Manomboka amin'ny alatsinainy [14 Septambra] izahay no manangona azy amin'ny fiarabe, miangavy ny ametrahana ny antsipirihan'ny entana alefa miaraka amin'ny sariny raha mety.
Mahazo ny fanohanan'ny orinasa portiogey goavana ihany koa izahay na amin'ny fanomezana na amin'ny fampitaovana tahaka ny fitehirizana sy ny fitaterana.
Hanana trano fitehirizan'entana telo izahay ao Porto, Leiria, ary Lisbonina izay hitehirizana ny zava-drehetra. Tazoninay ny fetra farany hiaingana ho amin'ny zoma faha-18n'ny volana ho avy izao. Mamerina ny fankasitrahana anareo rehetra indray.
Noresahan'ny Global Voices i Maria Miguel Ferreira, izay nanolo-tena hiasa amin'ny tetikasa. Nilaza i Maria fa mety hiova amin'ny fotoana farany ny kinasan'ny fanentanana amin'izao fotoana izao, raha vantany vao tonga any Hongria ireo fiarabe sy kamiao [mitondra ny fanomezana]:
Mifandray amin'ireo ONG maro ao Hongria izahay, mamantatra ireo lalana any amin'ireo sisintany ifanolorany amin'ireo firenena manodidina. Mandefa ny vaovao farany amin'izay lalana azonay aleha ireo ONG ao amin'ny faritra ary milaza ihany koa izay tena ilain-dry zareo indrindra. Noho izay antony izay ihany izahay vao afa-manapa-kevitra hoe aiza no hifaranan'ny valalamanjohy mifanakaiky indrindra amin'ny andro fahatongavana sy araka ny fanoroan'ireo ONG.
Rehefa nanontaniana amin'izay kinasan'ny fanentanana amin'ny manaraka rehefa lasa ny valalamanjohy voalohany i Maria dia nilaza fa “mbola mifantoka amin'ity valalamanjohy ity hatreto” ny mpikarakara.
Ao anatin'izany fotoana izany, maka sary ny fanomezany mialoha ny andefasana azy any amin'ny toerana fanangonana azy ireo malala-tanana. Ny sary eto ambany, izay napetraky ny reny iray antsoina hoe Xana Alves, dia ahitana izao hafatra manaraka izao:
Tudo empacotado! Agora vamos passar num dos pontos de recolha Aylan Kurdi Caravan.
Voatambatra avokoa! Izao izahay handeha hitondra azy ho any amin'ny toera-panangonan'ny Valalamanjohy Aylan Kurdi. Mety ho tsy dia betsaka, saingy tianay ho hitan'ny zanakay ilay izy ary hampitombo ny fahatakarantsainy fa mihoatra noho ny famoahana soratra firaisan-kina ao amin'ny tambajotra sosialy ny fanampiana ny hafa. Tsy te-ho be maoraly aho, anefa. Fa hizara izany aminareo rehetra.
Saripika: Xana Alves / Facebook
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nivalapatra teo amin'ny tora-pasika fitsangatsanganana tiorka ao Bodrum ny vatana mangatsiakan'ny mpitsoa-ponenana Alan Kurdi, telo taona, sy ny rahalahiny Galip, dimy taona. Nahazo lohatenin-gazety manerantany sy niteraka fahalalahan-tanana hoan'ireo Syriana mpitsoaponenana mirohotra mankany Eoropa amin'izao fotoana ny fahitana izany nofo mangatsiaka izany.
Este es el homenaje de arena al pequeño #AylanKurdi en la playa http://t.co/TbdLYRYTav pic.twitter.com/UvmWgGyIDU
Ity ny sokitra fasika ho fanomezam-boninahitra ilay zaza vao miana-mandeha Alan Kurdi eo amin'ny tora-pasika.
13 ora izayBelarosia